Ukunambitha kuka-Ely | Igumbi lokulala eli-4, I-2 Bath, i-Sauna Getaway
U-Kelly uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
I-ELY GEM! Indawo yokudlela yomndeni wethu, i-A Taste of Ely, iguqulelwe yaba umndeni weqiniso kanye neqembu elikhulu lokubalekela! Uzomangala ngobuhle kanye nesimilo salesi sikhala. Leli fulethi elinezitezi ezimbili zokulala lihlala enhliziyweni yedolobha lase-Ely.
Indawo yethu ilala kahle izivakashi eziyishumi nambili ezinamakamelo okulala amane, obhavu ababili, kanye ne-sauna/ishawa. Inekhishi elihlome ngokuphelele, ifenisha entsha kanye netafula lokubhukuda elinomlando.
Sitholakala endaweni eyodwa ukusuka e-Miner's Lake kanye ne-Trezona Trail.
Enkabeni yedolobha i-Ely, indawo iyisicaba ngendlela ehlukile, ivumela ukufinyelela kalula kuzo zonke izinkathi zonyaka. Ikhaya elihle, kodwa elinethezekile lilinganiselwa ku-3000 sq ft futhi lihlanganisa amagumbi okulala angu-4, itafula lokudlela eliyingqayizivele, amashawa esimanje, amagumbi okuhlala amabili kanye netafula lokubhukuda. Ikhishi negumbi lokuphumula kungumqondo ovulekile, negumbi lokugezela nelondolo zitholakala eduze nekhishi. Amakamelo okulala angu-3 anesitezi esingezansi afaka phakathi: (1) indlovukazi, (2) umbhede owodwa oyisixhaxha nombhede ohlukene wamawele, kanye (3) namawele amabili. Igumbi lokulala eliphezulu linombhede wendlovukazi onombhede kasofa endaweni ephezulu. Sikunikeza zonke izidingo zakho eziyisisekelo zasekhishini, amalineni, izingubo zokulala/imicamelo eyengeziwe, amathawula, nezinto eziyisisekelo zasendlini yangasese.
Uzothandana nomkhathi wale ndawo, isikhala se-Ely esiyingqayizivele esine-patio yangaphandle egcwele. Kukhona itafula labantu abangu-12, i-grill, nezihlalo ezimbalwa ze-Adirondack ngaphandle ukuze uzijabulele ngasese. Sizokushiyela uhlu lwezindawo zasendaweni esithanda ukuzivakashela, kanye nemephu eya kumzila wemoto yeqhwa.
Singabanikazi bamabhizinisi endawo abathanda i-Ely neBurntside Lake. Sijabule kakhulu ukuthi singabelana nawe ngempahla yethu nothando lwechibi. Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuthi ukhululekile futhi ujabulele ngempela ukuvakasha kwakho.
Sisebenza eduze kakhulu nendawo, ngokoqobo ngakolunye uhlangothi lomgwaqo. Uma udinga, sizokujabulela ukukusiza. Ngokuvamile, sithanda ukugcina ukuxhumana kwethu kuphansi ukuze ujabulele iholide lakho.
UKelly kanye noPaulie
Singabanikazi bamabhizinisi endawo abathanda i-Ely neBurntside Lake. Sijabule kakhulu ukuthi singabelana nawe ngempahla yethu nothando lwechibi. Sizokwenza kon…
Hlola ezinye izinketho ezise- Ely namaphethelo